iPhone X / Xr / Xs အသစ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူအဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ပြန်လည်စတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်စတင်ခြင်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
iPhone X အသစ်ရောက်လာပြီ Hard Reset လုပ်ရန် (သို့) စက်ကို reboot လုပ်ရန်အတွက်ပြောင်းလဲမှုအသစ် အမှု၌မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက် "ဖမ်းမိ" ရရှိသွားတဲ့။ iPhone7နဲ့7Plus မတိုင်ခင်က iPhone model တွေမှာကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ဖို့နည်းလမ်းက home button နဲ့ power button ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ iPhone7အသစ်ရောက်ရှိခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များပျောက်ကွယ်ခြင်းတို့ကြောင့် Apple သည် iPhone ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် (သို့) ပြန်လည်စတင်ရန်နည်းလမ်းကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် power ခလုတ်နှင့် volume down ခလုတ်ကိုတစ်ချိန်တည်းနှိပ်ရန်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အတွက် စတိုးဆိုင်များတွင်ယနေ့ဖွင့်လှစ်သောမော်ဒယ်သစ်, ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်တဖန်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ယခုတစ်ကြိမ်တွင် iPhone X အသစ်ပေါ်ရှိမည်သည့်ခလုတ်မျှဖြင့်မဆိုခုန်ကျော်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြမည့်ရိုးရှင်းသောအဆင့်သုံးဆင့်ဖြစ်သည်။
1 iPhone X / Xr / Xs ကိုဘယ်လို reboot လုပ်မလဲ
2 iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xr သို့မဟုတ် iPhone Xs Max ကိုမည်သို့ပိတ်ရမလဲ
3 Face ID ဖြင့် iPad Pro ကိုဘယ်လို restart လုပ်ရမလဲ
4 Face ID ဖြင့် iPad Pro မည်သို့ပိတ်ရမည်နည်း
5 ငါ device ကိုပိတ်သို့မဟုတ် reboot
6 အဘယ်ကြောင့်ငါ့ iPhone ကိုချိတ်ဆွဲထားသနည်း
iPhone X / Xr / Xs ကိုဘယ်လို reboot လုပ်မလဲ
iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod တို့ထိသောအခါ အနက်ရောင်သွားသည်သို့မဟုတ် device ကိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သောခလုတ်များ (သို့) အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့စက်၏ပြန်လည်စတင်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ရမည်။
iPhone X ကိုဘယ်လို restart လုပ်မလဲ မည်သည့်လမ်းဖြင့်မျှမဖြေပါနှင့်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘေးထွက်ခလုတ်ကို« On / Off »ဆက်တိုက်ပြုလုပ်သည်။ ပန်းသီးလိုဂိုပေါ်လာသည်အထိ
အကယ်၍ စက်၏ဤပြန်လည်စတင်မှုသည်ပြtheနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ရမည့်အရာမှာ iPhone ချိန်ညှိချက်များကိုရယူရန်သို့မဟုတ်ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။ iTunes, iCloud သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောနေရာတိုင်းတွင်အရန်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါက Settings -> Settings -> General -> Restart သို့သွားပါ။ ၎င်းသည် iPhone X ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးပြsolveနာကိုဖြေရှင်းသင့်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုဤကဲ့သို့သောပြaနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည် iPhone ကိုပြန်ယူရန်လိုသည်။
iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xr သို့မဟုတ် iPhone Xs Max ကိုမည်သို့ပိတ်ရမလဲ
iPhone X မကုန်မှီတိုင်အောင် home / sleep ခလုတ်သည်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှဖိထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားစက်ကိုပိတ်ထားရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်၊ iPhone X စတင်ခြင်းနှင့်အတူအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ iPhone X ကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဘေးထွက် home / sleep ခလုတ်ကိုအသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်များနှင့်အတူတွဲနှိပ်ပါ.
ထိုအချိန်တွင် iPhone ၏မျက်နှာပြင်သည်လမ်းကြောင်းသို့လိုက်ကာကျွန်ုပ်တို့လက်ချောင်းကိုလျှောရန်ဖိတ်ခေါ်သည့်ဆလိုက်ဒါကိုပြလိမ့်မည် ကိရိယာကိုပိတ်ပါ.
ဤနည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone X အားပိတ်ထားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ချိန်ညှိချက်များမီနူးများမှတစ်ဆင့်၊ မော်ဒယ်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုပိတ်ထားရန်ရွေးစရာရှိသည်။ ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့သွားရမယ် ချိန်ညှိချက်များ> အထွေထွေ> ပိတ်ပါ။ မော်ဒယ်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ ဤရွေးစရာကို iPad တွင်လည်းရနိုင်သည်။
Face ID ဖြင့် iPad Pro ကိုဘယ်လို restart လုပ်ရမလဲ
iPad Pro 2018 အကွာအဝေးသည်ပထမဆုံးသောစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာပြီး home button မပါရှိဘဲဤ device ကိုပထမဆုံးမော်ဒယ်ကတည်းကလိုက်ပါခဲ့သည်။ အရွယ်ကြီးမားသည့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်အက်ပဲလ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် iPad Pro အကွာအဝေးသို့ Face ID နည်းပညာထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Start ခလုတ်ပျောက်သွားပြီး၎င်းကိုထိုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်စတင်။ မရပါ.
iPad ID နှင့် Face ID နှင့်နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်များကိုပြန်လည်စတင်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုကြာမြင့်စွာမယူပါ အောက်ကအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ။
volume up ခလုတ်ကိုလျင်မြန်စွာလွှတ်လိုက်ပါ။
volume down ခလုတ်ကိုလျင်မြန်စွာလွှတ်ပါ။
Home / Sleep ခလုတ်ကိုဖိပြီးကိုင်ထားပါ။
Face ID ဖြင့် iPad Pro မည်သို့ပိတ်ရမည်နည်း
Face ID ဖြင့် iPad Pro ကိုပိတ်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ် iPhone X နှင့်နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်များကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ start / sleep ခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံနှင့် device ကိုပိတ်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိတ်ခေါ်သည့် slider တစ်ခုပေါ်လာသည်အထိ volume ခလုတ်နှစ်ခုလုံးကိုနှိပ်ပါ။
ငါ device ကိုပိတ်သို့မဟုတ် reboot
ကွန်ပျူတာလိုပဲ ပြန်လည်စတင်ခြင်းသည်ပိတ်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုဆက်ပိတ်ထားပါက operating system သည်လုံခြုံသောပိတ်သိမ်းမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသောလုပ်ငန်းအားလုံးကိုပိတ်ထားပြီး၎င်းကိုပြန်လည်စတင်သောအခါလည်ပတ်မှုပြသနာများကိုမပြပါ။ ဤသီအိုရီသည်ကွန်ပျူတာများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ကိုပြန်လည်စတင်ပါကလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်မှန်ကန်စွာပိတ်ရန်အချိန်ပေးခြင်းမရှိဘဲလည်ပတ်မှုစနစ်၏လည်ပတ်မှုလုံးဝပြတ်တောက်သွားသည်။ ယခင်ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့, ဒီသီအိုရီကိုလည်းကွန်ပျူတာများကိုသက်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းပြwithနာဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဒေတာများဆုံးရှုံးနိုင်သည်သာမက, operating system ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနိုင်ပါတယ်ကတည်းက, ဒါပေမယ့်လည်းဒီဖြစ်စဉ်ကို device ကိုပြန်လည်ပတ်မှုအတွက်အချိန်ပိုမိုကြာမြင့်သည်။
ရသောအခါ ငါတို့ iPhone ကို restart လုပ်ခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက function တစ်ခုကိုရော၊ ကျွန်တော်တို့ကို system ကိုပိတ်ဖို့ခွင့်ပြုပေးတဲ့သူကိုပါတုန့်ပြန်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် data ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်မရှိနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီစနစ်ကလုံးဝရပ်တန့်သွားပြီးပျက်စီးနေတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိမယ်။ အဘယ်သူမျှမအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမ။
အဘယ်ကြောင့်ငါ့ iPhone ကိုချိတ်ဆွဲထားသနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သည်ပြသနာများကိုပြသနိုင်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ၎င်းကိုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်တိကျသောလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ Apple သည် iOS version အသစ်တိုင်းကိုထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်တစ်ခုချင်းစီနှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone စွမ်းဆောင်ရည်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။
iOS ဗားရှင်းအသစ်တိုင်းနှင့်အတူ developer များကလိုအပ်သည် သင်၏အက်ပ်များကိုမွမ်းမံပါ iOS ဗားရှင်းအသစ်နှင့် 100% ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ရန်။ အသုံးပြုသူများအတွက်ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ developer အများစုဟာသူတို့ရဲ့ application တွေကိုသဟဇာတဖြစ်အောင် update လုပ်ပြီး performance ပြissuesနာမရှိပါဘူး။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်လိုအပ်သည်ထက်ပိုကြာလျှင်အက်ပလီကေးရှင်းပြင်ပမှတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မတွေ့မြင်လိုပါကအက်ပလီကေးရှင်းသည်မြန်ဆန်စေရန်အတွက်သူတို့ကိုဆက်သွယ်သည်
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ အက်ပဲလ်သည်သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ရရှိစေခဲ့သည် iOS အများပိုင် beta အစီအစဉ်၊ ဒါကြောင့်လာမယ့် iOS ၏သတင်းကိုစမ်းသပ်လိုသူမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို developer မပါဘဲလုပ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ Apple သည်များသောအားဖြင့်အများသုံး beta ကိုမထုတ်မီ developer များအတွက် iOS ၏ beta နှစ်မျိုးကိုပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ပေးသည်။
အကြောင်းပြချက်ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမဖြစ်ပါတယ် စနစ်တည်ငြိမ်မှု။ developer များအဖို့ system ၏တည်ငြိမ်မှုသည်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ အကြောင်းမှာ ၄ င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ၄ င်းတို့၏ application များကို iOS version အသစ်သို့ စတင်၍ Apple အကောင်အထည်ဖော်သောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်လိုက်ဖက်ညီစွာပေါင်းထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
iOS beta မှစီမံသောကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏တည်ငြိမ်မှုသည်အပြည့်အဝလုံလောက်မှုမရှိပါ နေ့စဉ် iPhone ကိုသုံးပါ အဓိကကိရိယာတစ်ခုအနေနှင့်၎င်းကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီပြန်ဖွင့်နိုင်ပြီးအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလျှောက်ထားခြင်းများကိုပိတ်ထားနိုင်သည် (သို့) အချိန်မရွေးတိုက်ရိုက်မဖွင့်နိုင်ပါကအချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်နိုင်သည်။ Beta operating system ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းမထုတ်မှီအထိဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » iPhone X အသစ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူအဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ပြန်လည်စတင်ခြင်း (သို့) ပြန်လည်စတင်ခြင်း
David Leonardo Gómez Pulido ဟုသူကပြောသည်
COVID19 ၏အခြေအနေနှင့်အတူရေဖြင့်သေချာစွာဆေးကြောပါ (ရေမြှုပ်။ မထိပါနှင့်) လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောဆပ်ပြာဖြင့်သာဆပ်ပြာရေကိုသေချာစွာဆေးကြောပါ။ ဆဲလ်ဖုန်းဖွင့်သည်။ (ပန်းသီးရေကန်နှင့်တွဲဖက်ပြီး ၁၀-၁၅ စက္ကန့်အကြာတွင်ဖန်သားပြင်တောက်ပပြီးပိတ်သွားသည်။ ပန်းသီးရေကန်ပြန်ပေါ်လာပြီးသံသရာဆက်ဖြစ်နေသည်။ အပူပေးစက်ငယ်တစ်ခု၏ရှေ့တွင်ထိုင်။ ရေရှိမည့်ရေကိုစောင့်နေသည်။ အငွေ့ပျံဖို့အဲဒါကိုထည့်သွင်း, ငါသည်ငါ့ iPhone ကိုပြန်ရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
နိဂုံး, iPhone X သည်ရေအတွက်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ iPhone X သည်ရေစိုခံသည်မဟုတ်။
David Leonardo Gómez Pulido အားပြန်ပြောပါ
အက်ပဲလ်သည်အီးယူရှိ Spotify အမှုအားပြန်လည်ဖြေကြားရန်ရှိသည်